မြင်းမိုရ်ဦး: PhD ကျောင်းသားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ဖို့...
Ph.D ကျောင်းသားဖြစ်ရတာ ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ လေ့လာမှုအသစ်တွေ၊ ရှာဖွေမှုအသစ်တွေနဲ့ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေကို ဖော်ထုတ်လုပ်ဆောင်နေရလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သုတေသနမှာစိတ်ပါပျော်ဝင်သွားတဲ့သူတိုင်းအခုလိုခံစားကြရမှာပါ။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ သုတေသနမှာနှစ်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သူတွေအတွက် Ph.D ကျောင်းသားဖြစ်ရတာဟာ ဘ၀မှာရှားပါးတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တချို့တွေလည်း အဆင်မပြေမှုအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံရပြီး Ph.D မပြီးမချင်းစိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ကြသူတွေ၊ တ၀က်တပျက်နဲ့လက်လျှော့လိုက်ကြသူတွေရှိကြပါတယ်။ ကံတရားလည်းပါသလို မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ခံယူချက်၊ အလုပ် နဲ့ သင့်တော်တဲ့ဘာသာရပ်-ပါမောက္ခဆရာရွေးချယ်နိုင်မှု တို့နဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။
၁။ ပထမဆုံးကိုယ့်ကိုလမ်းညွှန်သင်ပြမယ့်ဆရာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ၊ ကိုယ်စိတ်ပါတဲ့ဘာသာရပ်မှာ၊ လေးစားအားကျစရာကောင်းလောက်တဲ့ဆရာ-ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး၊ သုတေသနထောက်ပံ့မှု (grant) အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရသူ၊ သုတေသနဆိုင်ရာအခြေခံပစ္စည်းတွေစုံလင်သူကို ဦးစားပေးရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါတွေက ကိုယ်သုတေသနတကယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ အများကြီး အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ဌာနက grant မရှိလို့ ပစ္စည်းမစုံလင်လို့ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ သုတေသနမလုပ်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
၂။ ကိုယ့်ရဲ့သုတေသနစီမံချက်ပေါ်မှာ ကိုယ်တာဝန်ယူမှုရှိရပါမယ်။ ပါမောက္ခ-supervisor ကိုဘဲ အားကိုးနေတာမျိုး၊ မှီခိုနေတာမျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ သုတေသနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ materials-methods တွေကို လုပ်တတ်အောင် ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာ၊ သိတဲ့သူကိုလည်းချဉ်းကပ်ပြီး အကျွမ်းတ၀င်ဖြစ်အောင် ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်အောင်အားထုတ်ရပါတယ်။
၃။ အလုပ်ကိုကြိုးစားလုပ်ပါ။ ကျောင်းဖွင့်ရက်တွေအပြင် လိုအပ်လာရင် စနေတနင်္ဂနွေမှာပါ သုတေသနအလုပ်ကို လုပ်နိုင်နေရင် ပိုပြီး အလုပ်ပြီးပြီး ထိရောက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာက မြန်မာပြည်မှာလို ကျောင်းသားတွေ-ကျောင်းတွင်းဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲ နေ့ည အချိန်မရွေးဝင်ထွက်နေနိုင်တာကို အခွင့်ကောင်းအဖြစ်သုံးသင့်ပါတယ်။ အဲလိုပြင်ပချိန်တွေမှာ ၀င်လုပ်နိုင်ရင် လူသူအနှောက်အယှက်နည်းတာမို့ အလုပ်မှာအာရုံပိုစိုက်နိုင်ပြီး အလုပ်ပိုပြီးပါတယ်။
၄။ တဆက်တည်းမှာ၊ အခါအားလျော်စွာ အားလပ်ချိန်၊ အလုပ်တာဝန်တွေက အနားယူချိန်ပေးရပါမယ်။ ဆက်တိုက်မောင်းလွန်းရင်အင်ဂျင်ပူသလို လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကျမသွားအောင် ရံဖန်ရံခါ သုတေသနတွေကနေ လွတ်မြောက်တဲ့ စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး-အနားယူချိန်၊ မိသားစုချိန်တွေပေး ရပါတယ်။
၅။ ကိုယ့်ဘာသာရပ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံး စာတွေ (literatures) ကို အမြဲဖတ်နေရပါမယ်။ နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်များအားလုံးတညီတညွှတ်တည်းလက်ခံထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်း၊ အကိုးအကားတွေစုံနိုင်သမျှစုံအောင်ဖတ်ရှုရပါတယ်။ Peer-reviewed journal လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာက ပညာရှင်တွေက အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီးမှ ထုတ်ဝေတဲ့ academic journals တွေကိုဖတ်ပြီး ကိုယ့်သုတေသနနဲ့ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အကိုးအကားအဖြစ်မှတ်သားထားရပါတယ်။ သုတေသနသမားဆိုတာ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ သိပ္ပံနယ်ပယ်က ဗဟုသုတအချက်အလက်တွေကို ပိုပိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖတ်သင့်တဲ့စာသေချာမဖတ်ခဲ့ရင် ဘာတွေကသိပြီးသား အများလက်ခံပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ နောက်အရေးကြီးတာတခုက ၀ီကီပိဒိယလို Peer-reviewed မဟုတ်ဘဲ လူတိုင်းက ၀င်edit လုပ်လို့ရတဲ့ ပညာရှင်အားလုံးတညီတညွှတ်တည်းလက်ခံထားခြင်းမရှိသေးတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဘဲ အလွယ်တကူ မယုံကြည် မကိုးကားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးက undergraduate တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေးတွေတောင် ၀ီကီကို ကိုးကားချင်ကြလို့ တက္ကသိုလ်က စည်းကမ်းနဲ့တားမြစ်ခဲ့ရဖူးတာဖတ်ရပါတယ်။ ကိုယ့်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာကို ဘယ်ဂျာနယ် ဘယ်စာအုပ်မှာရှာရမယ်ဆိုတာ သိထားသင့်ပါတယ်။
၆။ သုတေသနစမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်တဲ့အခါ ဘယ်နေ့ဘာလုပ်မယ်စသည်ဖြင့် အစီအစဉ်သေချာကျကျနနဆွဲပြီး အချိန်ဇယားအတိုင်းမပျက်မကွက်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်ပြီးတယ်၊ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သုတေသနမှတ်တမ်းစာအုပ်မှာသေချာမှတ်တမ်းတင်ထားရပါမယ်။ ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင်သတ်မှတ်ထားရပါမယ်။
၇။ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးဆန်းသစ်တဲ့စိတ်မွေးပေးရပါမယ်။ (Be creative) ဘာကြောင့်ဒီလိုရလာဒ်မျိုးရတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ရလာဒ်တွေရနိုင်မယ်စသည်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်တွေးတော ဥာဏ်ကွန့်မြူးတဲ့အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးရပါတယ်။ Ph.D ဆိုတာ ကိုယ့်ပါမောက္ခ-supervisor ကချမှတ်ပေးလိုက်တဲ့ road map အဖြစ်မမြင်ဘဲ၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်အကြံဥာဏ်-ဖန်တီးနိုင်မှု-အလုပ်တွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခခိုင်းတာလုပ်တဲ့အဆင့်လောက်မှာ ရပ်မနေသင့်ပါဘူး။
၈။ အဆင့်အတန်းမီသုတေသနစာတမ်းတွေရေးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ သုတေသနဆိုတာ ရလာဒ်ကောင်းတွေရတာနဲ့တင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲ ဒါတွေကို အများကသိအောင်၊ အကျိုးပြုနိုင်အောင်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကလက်ခံအသိအမှတ်ပြုတဲ့ဂျာနယ်တွေမှာ တင်ပြဖြန့်ဝေရတာပါ။ ဒီလိုရေးနိုင်ဖို့ စာဖတ်နာရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံလည်း ကောင်းမွန်နေရပါမယ်။
၉။ ကိုယ့်ပညာရပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ Academic seminar/conferences ပညာရပ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ညီလာခံတွေ အခွင့်သင့်တိုင်းတက်သင့်ပါတယ်။ နားထောင်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်တာ၊ ပြန်လှန်ဖြေကြားတာမျိုး အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်သုတေသနတွေကိုလည်း အခွင့်ရတိုင်း ဆွေးနွေးပွဲညီလာခံတွေမှာဖတ်ကြားဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ သုတေသနသမားတွေဆီက အကြံပြုချက်၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ချက်တွေ အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်ရတတ်ပါတယ်။
၁၀။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Ph.D ကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပြီးဆုံးစေဖို့ အောက်ကအချက်တွေထဲက အနည်းဆုံး အချက်၎ချက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုပါတယ်။
creative - တီထွင်ဖန်တီးချင်စိတ်ရှိခြင်း
hard-working - အလုပ်ကြိုးစားခြင်း
skilful - ကျွမ်းကျင်ခြင်း
lucky - ကံကောင်းခြင်း
ကံကောင်းခြင်းဆိုတာက ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်လို့ တခြားအချက်တွေပေါ်မှာ ပိုပြီးဂရုစိုက် အားစိုက်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်တဲ့ Ph.D ကျောင်းသားကောင်းတဦးဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါကြောင်းဗဟုသုတ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Reference: Georgia Chenevix-Trench. What makesagood PhD student? NATURE|Vol 441|11 MAY 2006
Posted by Dr. Nyan at 9:07 PM
ကျောင်းပြန်တက်ရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားနေမိတာ။ စာဘက်ကို ပါလာအောင် ကိုယ့်ဘာသာ မဖြားယောင်းနိုင်သေးဘူး။ PhD ထိ ဆက်နိုင်ကြတဲ့လူတွေကို တကယ်ပဲ ချီးကျူးမိပါတယ်။
အနော်တော့ဦးဥာဏ်လို PhD မဟုတ်ဘဲ